Humna diinaa hidhaannoo ammaayyaa fi tikaan saba keenya irraatti bobbaahe ofirraa deebisuu kan dandeenyu qabsoo hidhaannoo itti jirruuf tumsa barbaachisuu taasisuudhaan -
Humna diinaa hidhaannoo ammaayyaa fi tikaan saba keenya irraatti bobbaahe ofirraa deebisuu kan dandeenyu qabsoo hidhaannoo itti jirruuf tumsa barbaachisuu taasisuudhaani.
Ibsa Ajajaa Ol-aanaa ABO/WBO haala yeroo irraatti, Amajjii 23 2020
Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn, gaaffiin ummata oromoo, gaaffii abbaa biyyummaa waantaheef kunis kan deebihu danda’uu bilisa tahee, HIREE isa ofiin murteeffatu yoo dandahee qofa jedhee amana. Dhugaattis gaaffiin abbaa biyyuummaa sabootaa impaayera keessaatti deebii argatee hin beeku. Kanaafuu galii qabsoo Oromoo hanga geenyuutti akkasumaas gaaffiin bu’uuraa ummaata keenyaa hanga deebihutti falmaa bilisummaa gad jabeessinee kan itti fufnuu tahuu isiin hubaachiisna.
WARAANI BILISUMMAA OROMOO WBOn, akeeka fi kaayyoo uummanni Oromoo baroota dheeraaf aarsaa itti kaffaaluun asiin gahee tiksuuf amaana fudhatee araara shiraa heeraaf sagantaa siyaasaa ABO faalleesse akkasumaas, ulaagaa araara gabroomsaaf garboonfataa hin guutne hin fudhaadhu jedhee diduun erga duulli hadhaawaan kallaatti maraan itti banamee waggaa 2 lakkoofsisuuf jiraa. Haaluma kanaan hoogganni dhaabaa araara sirna araara cabsee fi shiraa kanaa fudhaachuun seeraa fi sirna mootummaa gabroomfataa faashistii Itoophiyaa jalaattin karaa nagaan socho’aa jedhee erga biyyatti galee boodaa WBOn hooggana mataa isaa AJAJA -OLAANAA-ABO/WBO (superme military and political command) IRROOMSUUN of taaligaa fi qabsoo bifa waligalaan deemaa jiru kanaaf hoogansa kennaa Jira. Akkuma yeroo adda addaa Ibsaa turreetti WBOn qunnaamtii tokkollee murna Hoggaana ABO karaa nagaa filatee galee waliin hinqabu. Kanaaf haala amma keessa jirruu kanaan Ajajni Ol-Aanaan ABO/WBO akeeka qulqulliitti kan ganamaa qabatuun galii qabsoo Oromoo isa haqaa gaggeessaa kan jiruu tahuu hubaachuun namoota hanga ammaatti tumsiitan galateeffachaa, uummata Oromoo baldhaadhan ammoo, WBO waliin akka hiriirtaan kan jedhuu waamicha keenya irra deebiin dhiyeessina.
Uummaanni keenya biyya ambaa jirtan haala WBOn keessaa jiruuf dirqaama olaanaa ifitti fudhatee wareegama ulfaataa baasaa jiru hubattani, tumsa gochaa jirtaniif galanni keessaan Bilisummaa dha.
WBOn lola ulfaataa mootummaan nafxanyaa Abiyyiin gegeefamu irratti labsee jiru ufirraa qolachaa jira. Lolli kun akka salphaatti dhaabbatuuf hindeemuu, lolli kun dirree Oromiyaa irratti karaa lamaan deemaa jira.
Kuniis gama tokkoon qaama biyyaan bulcha ofiin jedhuun kan gaggeeffamuun duguuggaa sanyummaa saba oromoo irraatti gaggeessaa jiruu yoo tahuu.
Kan lammaaffaa ammoo humnoota qindaawaa sochii duuriyyee fakkeessuun nafxanyoonni duula humna siyaasaa fi hidhaannoo qabuu kan magaaloota Oromiyaa keessaatti gaggeessaa jiraaniidha.
Balaa haala kanaan Oromoo irraa gaheenis magaaloota Oromiyaa kanneen akka Arsii: Abboomsaa, Asallaa Ciroo, Baalee, Gobbaa, Qoree; Haraargee keessa: Haraar, Awwadaay, Dirree Dhawaa, Haraamayyaa; Baha Shawaa: Adaamaa, Bishooftuu, Duukaam fi Magaala Finfinnee, naannawaa Finfinnee dabalatee bobbaa waraana magaalaa jajjabaa gaggeessuun lubbuu ilmaan Oromoo balleessaa kan jiraaniidha.
Lollii kuniis dachee Oromoo irraatti waan adeemsifamuuf haguma dheeratu ummata keenya irraatti miidhaa hamaatu gahaa! Kanaafuu lolaa kana gabaabsuun kan dandaayamuu humna hidhaatee Oromoo balleessaa jiruu hidhaannoo fi dhiheessii gahaan dura dhaabbatanii roorroo qolaachuu qofaan tahuu hubaattanii akka WBO waliin waan barbaachisu kamiiniyyuu dhaabbachuun aarsaa qabsoon feetu kaffaaltaan Ajajni Ol-Aanaan ABO/WBO ammaallee waamicha isaa dhiyeessa. Lola kana gabaabsuun dirqama hunda keenyati! Inni biyyaa keessaa addaatti ammoo QEERROON/QARREEN, shiraa mootummaa kanaa hubaattanii aggaammii saba Oromoo irraatti humna badii mootummaa warraa nafxanyaa kanaan adeemaa jiruu duraa akka dhaabbattaan waamicha keenya haaroomsinaa. Kanaafiis bilisummaan tolaa kan hin argaamne tahuu hubachuun karaa isiniif dandayameen WBO cinaa dhaabbachuun qabsoo bilisummaa finiinsuun yeroon ammaadha!
Dhumarraatti uummanni keenya biyya ambaa jirtan Guyyaa WBO sababeeffachuun tumsaa Waraana keessanif gochaa jirtan karaa caasaa keenyaa Global OLA support Task force(humna deeggarsa WBO Idil Addunyaa) irra odeessi nugahaa jira. Gumaachi keessaan isa yoomuu caalaa daran cimee akka itti fufuu gadi jabeessine gaafanna! Lola Oromiyaa fi Oromoo cabsuuf nurratti labsamee jiru kana fashalsuuf diinagdeen murteessaa tahuu hubachuun dhaabbatan deeggarsi WBOf gootan hunda hirmachisuun cimee akka itti fufuu isiniin jennaa.
walumaa galaatti qabsoo hadhooftuu hogganummaa Ajaja Olaanaa ABO/WBOtiin gaggeeffamaa jiruu kana waliin hiriiruun sagalee, humna, irree fi jabiina akka taatniif waamicha isiniif dhiyeessinaa.
Injjifannoo Ummata Oromoof!
Ajajaa Ol-Aanaa ABO/WBO
Amajjii 23, 2020
← Recent Fighting in Guji Zone, Oromia, Displaces Hundreds Ejjennoo Marii Oromoota Munshini fi Naannoo →
3 thoughts on “Humna diinaa hidhaannoo ammaayyaa fi tikaan saba keenya irraatti bobbaahe ofirraa deebisuu kan dandeenyu qabsoo hidhaannoo itti jirruuf tumsa barbaachisuu taasisuudhaan”
Faaya January 24, 2020
Dhaabonni oromo WBO’s ta’ee ODP’n yoo oromoof yaaddan maaliif waldhabdu rakkoo ilaalchaaf jecha kan miidhamu ummata ?
Barakat Salamoon Abrihaam January 25, 2020
O.P.D.O.n jaarmaa siyaasaa Oromoo osoo hin taane gurmuu bitamtuu (mercinery group) Wayyaanee ti.Oromoon dhiifama siif goonaa of sirreessi jedhee carraa kennuufis badiin waggaa 30i guutuu hojjette hirriba ishee dhoorgee ofumaan of huutee of ajjeeftee jirti.Bakka ishee itti awwaale Dr.Abiyyi Ahmad gaaffachuu qabda malee eenyu burjaajessuu feetee xibaarta. Kuni gaaffii diinaa ti.Namni kana odeessu mataan isaa diina kufaatii Oromoo hawwu akka ta’e irraa calaqqisa.W.B.O.n ammoo jaarmaa qeerroo maqaa “WARAANA BILISOOMSAA OROMIYAA”
ykn “የኦሮሚያ ነፃ አውጪ ሰራዊት”
ykn “Oromia Liberation Army” jedhamuu diina isaa weerartuu Oromiyaa of irraa qolatchaa lubbuu
isaa wareegaaf qaama kenne waan abbaa dhugaa fii ergamtuu diinaa dirree tokkotti wal dorgomsiisuun gonkumaa
“ቅዱስ ዋቅ ሆይ፣ ተናግሮ አናጋሪ፣
ቆዳ ግልብጥ ተንኮለኞችን ያዝልን።”
Horaa bulaa hoffolaa.
Barakat Solomoon Abrihaam January 25, 2020
Sirrii Fii Fudhatamaa.
Preaching unity but flying solo, Abiy’s ambition may stall Ethiopia’s transition February 25, 2020
Protesters in Aweday Beaten, Shot at, as Video Exposes Army Crack Down against Civilians February 25, 2020
RSWO: Boombii harkaa qaamota mootummaan, Oromoota Ona Amboo keessaa gowwoomsaafi doorsisaan February 24, 2020
Ethiopia PM leaves neutrality in Somalia and leans towards Turkey and Qatar February 24, 2020
Abiy’s Bid to Reconcile Somalia Hits a Wall February 24, 2020
OBS: Qophii harka fuunee Dr. Eebbisee Addunyaa, Doctora Herregaa waliin February 24, 2020
What do Abiy Ahmed, Michael H. Raynor, Isayas Afeworki and unitarist Ethiopian elites have in common regarding Oromo nationalism? February 23, 2020
Prosperity Party’s Plan of Economic Zones in Oromia a State within a State: Disintegrating and Weakening Oromia February 23, 2020